Udinga uhlelo lwe-accounting lwenkampani yakho? | Ezezimali Zomnotho
Encarni Arcoya | 20/07/2021 14:35 | Umnotho jikelele
Ukubalwa kwebhizinisi kungenye yezinhlungu ezinkulu zekhanda. Akudingeki nje kuphela ukuthi uqiniseke ukuthi yonke imali engenayo nezindleko ziyafana, ukuthi irekhodi lenzuzo noma ukulahleka kuyagcinwa, noma ukuthi kunamanothi nsuku zonke akho konke okuthengiswayo nokuthengiwe. Futhi uma ungenayo i- Uhlelo lwe-accounting lwenkampani yakho izinto zingaba nzima kakhulu, ikakhulukazi lapho ziqala ukukhula.
Kodwa, Kungani ukuba nohlelo lwe-accounting kubaluleke kangaka? Kungani kungcono kakhulu noma ngabe une-SME noma ibhizinisi ngazinye futhi uyazisebenza? Sikunikeza izizathu zalokhu ngezansi.
1 Yini ebhekele inkampani
2 Izizathu zokusebenzisa isoftware ye-accounting yebhizinisi lakho
2.1 Uzokwazi ukulawula konke ukunyakaza
2.2 Yonga imali
2.3 Ungahlanganisa izinhlelo
2.4 Uzogcina ukuhamba kwemali kuhlelekile
2.5 Uzoba 'nobufakazi' boMgcinimafa
2.6 Uvikela imininingwane
Yini ebhekele inkampani
Ukubalwa kwezimali. Uma kuyisihloko osifundisile esifundweni, uzokwazi ukuthi, kwasekuqaleni, kubonakala njengokuyinto enzima kakhulu. Lapho empeleni akunjalo. Kodwa-ke, abaningi bacabanga ukuthi ukuqhuba ibhizinisi akunzima kangako nokuthi abadingi izinhlelo eziyinkimbinkimbi zokubamba ukunyakaza kwezomnotho. Iphutha elikhulu.
Kulokhu, kubalulekile ukuqaphela lokho I-Accounting ayikuniki kuphela irekhodi lemali engenayo nezindleko inkampani enazo, kodwa futhi nezimpahla nezimpahla okungokwakho. Futhi konke lokhu kunomthelela wokwethula ama-akhawunti ahlelekile futhi acace ukuhambisana nazo zonke izibopho ezikhona ne-Tax Agency.
Ngaphezu kwalokho, lokhu akuyona indaba yezinkampani ezinkulu kuphela. Izinkampani ezincane kufanele futhi zikhathazeke ngokwazi ukuthi isimo sebhizinisi siyini, ukuze babone ukuthi, ngasizathu simbe, akuhambi kahle (futhi hhayi ukutshala imali, ekugcineni, engeke itholakale futhi ingakubeka esikweletini) noma, ngoba Ngokuphambene nalokho, kwakukuhle kakhulu ukuthi ungakucabanga ukukhula.
Izizathu zokusebenzisa isoftware ye-accounting yebhizinisi lakho
Uma uzibuza njengamanje ukuthi kungcono ukudonsa isistimu yakho yokubalwa kwemali bese ushintshela kwisoftware ye-accounting, nazi ezinye izizathu zokufaka ibhalansi eceleni.
Uzokwazi ukulawula konke ukunyakaza
Cabanga ukuthi enkampanini yakho unencwadi yokuqopha lapho ubhala khona konke ukunyakaza kwezezimali okwenziwayo. Uvala ibhizinisi, uye ekhaya bese, ngokuzumayo, ukhumbule ukuthi akukho okunye okubhalile. Ubhala phansi ephepheni ngosuku olulandelayo ... Futhi uyakhohlwa, kodwa futhi ubhala neminye iminyakazo ongayikhumbulanga. Futhi njengoba ungenayo incwadi eseduze, awukwazi ukuyenza ngesikhathi oyikhumbula ngayo. Ukudilizwa? Ukuthi ekugcineni uzogcina ulahlekelwe yilawo maphepha amancane ukhohlwe ukubhala konke phansi.
Ngohlelo lwe-accounting lwenkampani yakho lokho akwenzeki, ngoba uhlelo lukuvumela ukuthi ufinyelele ngokwamanani, noma ngabe ukuphi, kuyo yonke imininingwane yebhizinisi lakho, ngendlela yokuthi, uma ukhumbula okuthile ekhaya, akudingeki ulinde ukufika enkampanini ukuyibeka, ungakwenza lapho.
Futhi kwenzeka into efanayo ukubheka imininingwane, kungaba yizilinganiso, imibiko, ukubona isimo sokwenza izinqumo mayelana nokutshalwa kwemali, njll.
Yebo, ukufaka imali kuhlelo lwe-accounting lwenkampani yakho kungabalulekile, kepha awucabangi ukuthi kuzokhokha kungekudala? Cabanga ukuthi unerekhodi eliphindayo lenyanga zonke, noma masonto onke. Kufanele uhlale ukhomba ngokufanayo, okuthatha isikhathi kude nawe.
Esikhundleni salokho, kufayela le- Uhlelo ungazenzela imisebenzi ephindaphindwa kakhulu futhi uzifake ngokuzenzakalela. Ngakho-ke, leso sikhathi singabelwa ezinye izinto enkampanini yakho, noma isikhathi sakho samahhala.
Ukubalwa kwezimali kuhlobene kakhulu neminye iminyango efana neHuman Resources (ngodaba lwamaholo). Ukuba nohlelo olungangenisa futhi luthumele idatha kuyadingeka ukonga isikhathi nokwenza ibhalansi kangcono. Futhi yilokho, awudingi ukuwafaka ngesandla, kunalokho, zingasuswa ngokuzenzakalela zisuswe kwesinye isayithi ukuze zifakwe kwenye.
Uzogcina ukuhamba kwemali kuhlelekile
Ngomqondo wokuthi uzokwazi ngaso sonke isikhathi izinkokhelo nemali engenayo eyenziwa enkampanini, ngendlela yokuthi, cishe ngokushesha, uzokwazi ukuthi kwenzekani ebhizinisini lakho nsuku zonke.
Lokhu futhi xwayisa ngokungalawuleki futhi ubone ukuthi kwenzekeni ngaphambi kokuthi inkinga inganakwa bese kuba nzima ukulandela ngomkhondo ukuthi ukungahambisani kahle kuqhamuke kuphi emidlalweni.
Uzoba 'nobufakazi' boMgcinimafa
Njengoba wazi, i-Agency Agency idinga ukuthi izinkampani, kanye nabazisebenzayo, bethule amamodeli ayimpoqo abakhokha ngawo intela njalo ngekota. Kepha kuthiwani uma i-Agency Agency ikubiza futhi ifuna ukubona ukubalwa kwezimali kwakho? Uma ungayiphethe kahle, ungadala ukuthi bakusole bese beqala ukuphenya ukwenza ama-akhawunti futhi, uma bengahlanganisi, bayokhokha inhlawulo.
Ngakolunye uhlangothi, ngohlelo lwe-accounting lwezinkampani lokhu kuzoba nzima kakhulu ngoba uzoba nakho konke okuzenzakalelayo futhi lokho kuzokusiza ugweme amaphutha Ngaphezu kwalokho, uzokwazi ukuletha intela onayo ngaphambili kakhulu (ngoba akudingeki ukwenze njalo ngenyanga noma kwikota ngayinye, kepha kopisha futhi urekhode njengoba imali engenayo noma izindleko zenzeka).
Ngaphezu kwesisodwa kungenzeka ukuthi ubhekane nokuthi idiski lapho ugcine yonke i-accounting yephuliwe noma awukwazi ukuthola imininingwane. Bekuzoba nzima kakhulu ukube bekuyizandla futhi ungawatholi amaphepha noma imibhalo lapho ububhala khona konke.
Ngokuyibeka endaweni "kwi-Intanethi", lapho ungayifinyelela khona kusuka ezindaweni ezahlukahlukene, ngeke ube naleyo nkinga yokulahleka.
Ngaphezu kwalokho, bazoba njalo ephephile ohlelweni futhi ungalanda ngisho nedatha ukuze ube namafayela wokusekelayo uma kwenzeka nje.
Ukuthola uhlelo lwe-accounting lwenkampani yakho akunzima. Kuningi emakethe futhi kufanele usebenzise isikhathi esithile ukubona ukuthi iyiphi ongayithanda kakhulu. Isincomo sethu ukuthi uzame eziningana zazo ukuthola ukuthi yini efanelekela kahle okudingayo. Ungasincomela ezinye izinhlelo?
Indlela ephelele ye-athikili: Ezezimali Zomnotho » Umnotho jikelele » Udinga uhlelo lwe-accounting lwenkampani yakho?